Music — Trip LEE - OFISIALY SITE
Mba hampitana ny hafatra, Trip naka fomba hafa ny nanoratra ity indray mitoraka. Raha tokony miara-miasa miaraka amin'ny maro mpamokatra, dia niara-niasa efa ela fotsiny amin'ny Gawvi mpamokatra ho an'ny rakikira manontolo tamin'ny Atlanta Studio. Sonically, Mitsangàna voalohany single “Shweet” maneho ny be talenta na Gawvi sy ny Trip Lee. Miaraka amin'ny fifankahazoan'ireo famokarana, ny lalana mahazatra nods izany teo atsimo Houston Aza kivy amin'ny New York fomba fitantarana. Trip ny andininy mitoetra ho mazava tsara raha tena ilaina izy ireo. Mandritra izany fotoana izany, “Sweet Fandresena” manorina avy amin'ny firy andininy ho goavana hook izany avy hatrany toy ny Trip manome tanjaka izy ny areti mikoriana maka mihazona. “Manolo” dia mahita indray mandeha indray ny ekipa miaraka Vokatr'izay Records’ lehibe ny lehilahy sy ny namana akaiky Lecrae. miara-, ny roa lahy handrehitra hip-hop iray hafa modelim Fetsy eo mafy tenona hirahiran'ankizy afomanga.
Ny raki-kira Manomboka amin'ny New Dreams, mampiseho J.R. ary Sho Baraka, izay dia fifohazana ho amin'ny zava-misy fanirian-daza feno fitiavan-tena izay manenjika hiaro antsika amin'ny fiainana be dia be Andriamanitra maniry ny ho antsika rehetra. Trip manaraka amin'ny hiram-pirenena ny tsy andevo Robot ?? ary mampiseho tsara aho Lecrae, izay mirehareha amin'ny fahafahana, po sy ny fiarovana hita ao amin'i Kristy. On Fantasy ??, mampiseho Suzy Rock, Trip tsara mampiharihary ny nofy izao tontolo izao isika, na miaina ao na ela noho ary ny nofy ratsy Dia ho tonga ho. Hafa fiarahamiasa amin'ny KB, Andy Mineo, Jimmy Needham, V. Rose ary ny maro hafa, hankalaza ny hatsaran-tarehy ny fiainana nitondra ny momba ny tena emancipator, ny mpamorona sy ny zava-rehetra izay tsara. Raha famokarana avy amin'ny Dirty Rice, Alex Medina, G-Styles sy Joseph Prielozny manome resahana be voninahitra ho an'ny afa-po ny fiainana ao amin'i Kristy.
Ny Man Up Album, in miaraka amin'ny Man Up fanentanana, mikatsaka ny mamaly izany fanontaniana izany amin'ny alalan'ny fanatitra feonkira ny hetsika! Lecrae, Trip Lee, Sho Baraka, Tedashii, Pro, KB sy Andy Mineo dia miantso ny olona ao amin'ny Hip-hop kolontsaina ho lehilahy lehibe ara-baiboly tena fintinina amin'ny: nitarika-kerim-po, mandà passivity, manaiky andraikitra sy nanenjika ny fanetren-tena, amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny finoana an 'i Kristy.
Teo anelanelan'ny roa Worlds
Trip Lee mahita ny tenany amin'ny matetika sarotra, fa amin'ny farany nampanantena fanjakana–natokana ho amin'ny fiainana mandrakizay, nefa nokaramaina mba hamakivakiana ity iray ity. Ny raki-kira fahatelo, Teo anelanelan'ny roa Worlds manolotra mpihaino fitambarana fandinihana manokana MITOVITOVY ny fifaliana sy ny ady isika toy ny mpino rehetra, traikefa. Ny fanokafana lalana lohateny, Real Fiainana Music,?? mamintina izay hitranga amin'ny farany Trip ny tetikasa.
Hitanao ve Azy mazava tsara? Miverina amin'ny kapila faharoa, Trip Lee dia hanao asa fitoriana ho anao ny hahita an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mazava tsara ny family ny soratra masina, manome anareo ny 20/20 fahitana. mampiseho mampino, hafa ny famokarana, miaraka amin'ny endri-javatra sasany avy any Lecrae, Tedashii, Shai Linne, ary ny olon-kafa.
Raha toa izy ireo ihany Fantatro
Trip Lee ny Début Album! Izany tanora sy unashamed mpikambana ao amin'ny 116 Clique nametraka lehibe sasany hafanana amin'ny “Raha toa izy ireo ihany Fantatro”. Tsy te ho tara avy amin'ny ity iray ity. Trip Lee mikasika amin'ny iray taonina isan-karazany izay miatrika olana eo amin'ny mandeha miaraka amin'i Kristy, amin'ny fomba tokony handinika ny fiainantsika manokana ny sasany fampianarana lehibe eo amin'ny 2 olona ny amin'ny Andriamanitra telo izay iray. Ataovy azo antoka ianao COP CD ity dia mibosesika ho any amin'ny tononkira. Efa renareo Trip Lee amin'ny 116 Clique panangonana Album ary ankehitriny ianao dia afaka mahazo ny tena fifanarahana eo amin'ny voalohany lavany feno famoahana amin'ny famokarana amin'ny Tony Stone, JR, Lecrae, ary more, miampy ny sasany endri-javatra lehibe amin'ny Masoivoho, Lecrae, Tedashii, Lelafo sy ny hafa!